Xavi Oo Qabanaya Shaqada Leylinta Kooxda Barcelona – Goorma Ayay Noqoneysaa? – Garsoore Sports
Xavi Oo Qabanaya…
Tababaraha Kooxda Al-Sadd Xavi Hernandez ayaa la filayaa inuu qalinka ku duugo qandaraas cusub oo uu kula joogayo kooxda Qatar taasoo siin doonta xoriyad uu ugu biiri karo Barcelona haddii ay albaabka usoo garaacaan.
Xavi ayaa la saadaalinayay inuu ku laaban doono Camp Nou sanado badan, waxaana dad badan ay u maleynayeen inuu xagaagan noqon doono waqtiga ugu fiican ee uu kusoo laaban karo kooxda Catalan.
Qandaraaska uu kula jiro Al-Sadd ayaa wuxuu dhacayaa dhammaadka bisha June, iyadoo madaxweynaha cusub ee Barcelona Joan Laporta uu la dhacsanyahay shaqada uu Xavi ka hayo dalka Qatar, xiddigahaha kooxda Barcelona waxay umuuqdaan inay jeclaan lahaayeen in Xavi uu usoo dhaqaaqo dhankooda.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay AS, Xavi ayaan ku laaban doonin Barcelona xagaagan madaama uu ogolaaday heshiis labo sano ah oo uu kula sii joogayo kooxda Al-Sadd.
Goorma ayuuse usoo wareegi karaa?
Laakiin wargayska Marca ayaa dhanka kale aaminsan in uu si toos ah u dhici doono heshiiskan kaddib koobka adduunka ee 2022 qaasatan bisha December ee sannadkaas. Markaas ayay suuragal tahay inuu Barcelona kusoo biiro haddii ay u baahdaan.
Intii wadahadalada cusub ee kooxdiisa reer Qatar ay u socdeen, Xavi wuxuu ahaa mid furan isagoo si waadax ah u sheegay rabitaankiisa ah inuu ku laabto Barcelona maalin uun, Al-Saddna way ixtiraamaysay taas. Labada dhinacba waxay gaareen heshiis ah in laacibkii hore ee qadka dhexe ee kooxda Barcelona uu lahadli karo kooxdiisii hore haddii ay isaga soo wacaan.
Xavi ayaa haatan aaminsan inuu diyaar u yahay inuu ku biiro Barcelona, isagoo horay u diiday dalab ay usoo gudbiyeen maadaama uu ka baqayay inuu fashilmo haddii uu xilkaas qabto isagoon lahayn khibrad dheeri ah, waxaana uu go’aansaday inuu waxyar sugo dalabka xiga ee kooxdiisii hore.
Xavi ayaa horey u go’aansaday in Barcelona ay tahay kooxda kaliya ee uu kaga tagayo Al-Sadd. Iyadoo wararku ay sheegayaan in uu iska diiday dalabyo uga yimid kooxo fara ku tiris ah oo reer yurub ah madaama uu diirada saarayo kaliya inuu ku biiro Barcelona maalin uun.
Tags: Barcelona La Liga Xavi